… ireo andian’olona eny amin’ny Cité Ampefiloha, omaly maraina.
Ilay lehilahy voatsindrona antsy kosa mbola miady amin’ny fahafatesana. Milaza ny hanapaka lalana eny Ampefiloha ireo andian’olona ireo anio raha tsy mivoaka ireo olona efatra.
« Tsy manaiky izahay satria andian-jatovo ilay izy, saingy nahitahita ireo olona naratra dia nogadraina ny zanakay. Olona roa no nifanena tamin’ireo zatovo ireo ka nifandona. Teo no nahatonga ny olana ka nisy ny fifamaliana.
Taorian’izay dia nisy antso vonjy teo an-tanàna satria voalaza fa nisy olona namaky trano. Ireo zatovo tamin’io efa nody. Gaga anefa izahay fa nisy olona voatsindrona antsy hono », hoy ny mponina eny Ampefiloha, omaly, nilanja sora-baventy manakaiky ny fivarotana Elite Gsm.
« Avy any Toliara io dadatoako io no niakatra aty an-drenivohitra tamin’ny zoma 13 mey. Nasainay ho tonga teny an-trano izy. Tamin’ny fotoana nandehanany ny elakelan-trano mankany amin’ny tranonay no nisy andian’olona manodidina ny 15 isa.
Nitopy tany amin’izy ireo ny masonay ka avy hatrany dia tezitra izy ireo hoe tsy tokony hojerijerena hono. Teo no nisy ny olana ka avy hatrany dia nikasi-tanana ilay dadatoako izy ireo.
Nisy ny antso vonjy ka tonga ny polisy nikaroka ireo nahavanon-doza », hoy i Idealson, tompon’ilay trano nivantanan’ilay lehilahy naratra teny Ampefiloha. Tantara mitohy…